Ungasikhulula kanjani isikhala ku-Mac | ngivela ku-mac
Njengoba amapulatifomu okugcina amafu abe yimpahla kunesidingo futhi esetshenziswa izigidi zabasebenzisi, siqinisekisile ukuthi abakhiqizi baqhubeka kanjani njengamanje enikeza indawo yokugcina encane kakhulu emaqenjini abo. Nakuba i-Apple ivame ukulandela indlela yayo ngezindlela eziningi, kulokhu igcina inkambiso evamile yomkhakha.
Uma ikhompuyutha yakho isebenza kancane kunokujwayelekile, kungaba ngezizathu ezimbili: awukayifomethi isikhathi eside futhi ufake inguqulo ehambisanayo ye-macOS ukusuka ekuqaleni, noma uphelelwa yisikhala ku-hard drive yakho. Uma isizathu siwukuntuleka kwendawo, ufikile esihlokweni esifanele kusukela kulesi sihloko sizokukhombisa indlela yokukhulula isikhala ku-mac.
Ngeshwa, khulula isikhala ku-Mac akusho nje ukususa izinhlelo zokusebenza, kodwa kuhlanganisa ukuhlola ukuthi singakanani isikhala esithathwa yisistimu. I-macOS, ngokungafani neWindows, ilawula okuqukethwe okulandwe izinhlelo esizifaka ngendlela ehluke kakhulu.
Ngenkathi iWindows ivumela umsebenzisi ukuthi akhethe ukuthi iyiphi ifolda azolanda kuyo okuqukethwe esikufunayo, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngemidlalo, okuqukethwe okwengeziwe kohlelo lokusebenza... ku-macOS, wuhlelo oluphethe ukuligcina.
Ngeshwa, ikwenza ohlelweni, hhayi lapho umsebenzisi efuna ukuyigcina khona. Ngale ndlela, lapho sisusa uhlelo lokusebenza, asisusi konke okuqukethwe kwayo, kodwa sisusa uhlelo lokusebenza kuphela. Konke okuqukethwe okwengeziwe esikwazile ukukulanda kuzohlala kusistimu.
Ukuze uthole isampula, inkinobho. Esithombeni esingenhla ungabona ukuthi ingxenye Yesistimu ye-Mac yami, ngithathe i-140 GB enkulu, isikhala engikwazile ukusinciphisa saba ngu-20 GB kuphela, inani lesikhala esingaphezu kokulungiswa kweqiniso.
Akuzona zonke izinhlelo esizifaka kukhompuyutha yethu ezilanda okuqukethwe okwengeziwe okugcinwe ohlelweni, ngakho-ke into yokuqala esizoyenza ukukhulula isikhala ku-Mac. susa izinhlelo zokusebenza esingasazisebenzisi.
1 Ungazisusa kanjani izinhlelo zokusebenza ku-Mac
1.1 Indlela ye-1
1.2 Indlela ye-2
1.3 Indlela ye-3
1.4 Indlela ye-4
2 Ungabunciphisa kanjani ubukhulu bohlelo kuma-macOS
2.1 Idiski Yokusungula X
Ungazisusa kanjani izinhlelo zokusebenza ku-Mac
Ukuhlola ukuthi singakanani isikhala kokubili izinhlelo zokusebenza kanye ne-macOS kanye nohlelo ku-Mac yethu, kufanele chofoza i-apula lokho kukhonjiswa kumenyu ephezulu (akunandaba ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza esiluvulile njengoba le menyu iboniswa kungakhathaliseki ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza esiluvulile).
Okulandelayo, ake siphakamise Mayelana nale Mac futhi isithombe esiphezulu sizovezwa. Ukuze ufinyelele imininingwane yazo zonke izinhlelo zokusebenza futhi uhlole ukuthi ngasinye sithatha isikhala esingakanani, chofoza Phatha.
Okulandelayo, i-macOS izosikhombisa iwindi lapho singabona khona, ngendlela ephukile, bathatha isikhala esingakanani:
I-Las izinhlelo zokusebenza esikufakile.
I-Los imibhalo esizigcine kukhompuyutha.
Isikhala esithathwe ikhophi yezithombe esinazo kuhlelo lokusebenza Izithombe uma sisebenzisa iCloud noma zonke izithombe uma singasebenzisi iCloud kodwa sebenzisa uhlelo lokusebenza lwezithombe ukuphatha izithombe.
Isikhala esithathwe amafayela alandiwe kukhompuyutha yethu nawo akhona itholakala ku-iCloud.
Isikhala isicelo semeyili esikuso Mail.
Isikhala esithathwe uhlelo lokusebenza Imilayezo
Usayizi othathwe yiwo wonke amafayela aku- Umgqomo wamaphepha.
Uma sifuna susa izinhlelo zokusebenza ezifakwe ku-Mac yethu Ukukhulula isikhala sinezindlela ezi-4:
Kusukela esigabeni lapho isikhala esihlala isicelo ngasinye siboniswa, kufanele chofoza kuhlelo lokusebenza esifuna ukukususa bese sichofoza kukho Susa.
Ngale ndlela, singasusa noma yiluphi uhlelo esilufakile kukhompuyutha yethu, kungakhathaliseki ukuthi ivela esitolo se-Mac App noma cha, inqobo nje uma AKUZONA izinhlelo zokusebenza zesistimu.
Sivula i-Finder, chofoza kuhlelo lokusebenza esifuna ukuluqeda futhi sihudula kuDoti.
Sivula Isiqalisi Sohlelo, cindezela bese ubamba inkinobho yegundane kwesokunxele ehudulela uhlelo lokusebenza kudoti.
Le ndlela iyasebenza inqobo nje uma kuyizinhlelo esizifakile esitolo esisemthethweni se-Apple application, lokho kuvela ku-Mac App Store.
Sivula Isiqalisi Sohlelo bese sicindezela inkinobho yegundane kwesokunxele kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza zize ziqale ukudansa y bonisa u-X ekhoneni eliphezulu kwesokunxele lesithonjana.
Ukuze ususe uhlelo lokusebenza ngale ndlela, uma izinhlelo zokusebenza seziqala ukudansa, chofoza ku-X kuboniswa phezulu kwesokunxele sesithonjana.
Uma singakwazi ukukhulula isikhala esiningi ku-hard drive yethu ngoba inkinga itholakala ku usayizi wesigaba Sesistimu, kufanele sikhethe ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle, njengoba i-Apple, ngokwendabuko, ingasiniki noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukuze sikwazi ukuqeda leso sikhala.
Ukuze usebenzise lezi zinhlelo zokusebenza, kuyadingeka babe namakhono amancane ekhompyutha, njengoba sizongena ohlelweni ukuze sisuse konke esikwaziyo, esingakwazi ukususa ngaphandle kokuthinta ukusebenza nokuzinza kwekhompyutha.
Uma ungenalo lolo lwazi, indlela elula kakhulu yokukhulula isikhala sesistimu esihlala i-macOS ukufometha nokufaka kabusha zonke izinhlelo zokusebenza esivame ukuzifaka. Le nqubo ishesha kakhulu futhi ilula kunalokho ongakucabanga.
I-Disk Inventory X iyisicelo samahhala esizosivumela ukuthi siphenye ngaphakathi kwesistimu ukuze sibonise isikhala esithathwa yilelo nalelo fayela nezinkomba esinakho kukhompuyutha yethu ukuze sikwazi ukuhlonza, ngokwesibonelo, okuqukethwe kwezinhlelo zokusebenza ezingasafakiwe kukhompyutha yethu.
Uhlelo lokusebenza akulula ncamashi, kodwa uma sizinika isikhathi esithile kukho, sizokwazi ukukusebenzisa ngokugcwele futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukuqeda konke okuqukethwe u-Apple akubheka njengeSistimu, kodwa lokho empeleni okuqukethwe yizinhlelo zokusebenza esingasazisebenzisi futhi esinazo. kukhishwe kukhompuyutha yethu.
Uhlelo lokusebenza lwe-Disk Inventory X luyatholakala kuwe landa ngokuphelele ngewebhusayithi yayo.
I-DaisyDisk ngolunye uhlelo lokusebenza oluthokozisayo esinalo ukuqeda isikhala esithatha uhlelo lweqembu lethu. Nakuba isinika isikhombikubona esicophelela kakhulu, umphumela uyafana, njengoba, njenge-Disk Inventory, isivumela ukuthi sifinyelele amafolda esistimu futhi sisuse konke okuqukethwe kwawo.
IDaisyDisk ibiza ngentengo ema-euro angama-10,99 futhi iyatholakala ngewebhusayithi yayo. Ngaphezu kwalokho, kusivumela ukuthi sihlole uhlelo lokusebenza ngokuphelele mahhala, ngakho-ke uma singacacile nge-Disk Inventory X, singabona ukuthi lolu hlelo lokusebenza lusifanela kangcono yini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungasikhulula kanjani isikhala ku-Mac yakho